Inona no hatao raha very ny iPhone-ko? | Vaovao IPhone
Pablo Aparicio | | IPhone Security, Fampianarana sy torolàlana
Misy tahotra miely roa izay ananan'ny tompona telefaona finday rehetra. Ny voalohany dia saika natokana ho an'ny antsointsika finday avo lenta noho ny efijery lehibe misy azy ary tsy iza fa ny tahotra ny fahatapahan'ny tontonana eo aloha. Ny ahiahy faharoa mety ananantsika dia ny hoe very terminal Na amin'ny fanadinoana azy any ho any, hoe nilatsaka izy na nangalarina tamintsika.
Hatramin'ny faran'ny taona 2010 dia manana mpampiasa Apple fitaovana a fitaovana izay afaka mahita ny toeram-piantsonanay ary manolotra andiana safidy maromaro ahafahantsika mampihena ny fahasimbana raha misy ny fatiantoka na fangalarana. Tsy misy fisalasalana fa ilaina ny mianatra ny fandidiana Tadiavo ny iPhone ary izay rehetra atolotray antsika.
Raha very ny iPhone dia afaka miditra amin'ny Find My iPhone aho na amin'ny fitaovana iOS hafa na amin'ny alàlan'ny tranokala iCloud (avy amin'ny solosaina. Tsy mety avy amin'ny iPhone hafa izany).
Amin'ity lesona ity dia hampianariko anao ny fomba avy amin'ny tranonkala iCloud. Azonao atao ny manao toy izany amin'ny fitaovana iOS hafa raha miditra amin'ny app Find My iPhone ianao ary miditra ny Apple ID.
Ny dingana voalohany dia ny fidirana icloud.com ary safidio ny Find (my iPhone).
Amin'ny efijery manaraka dia hahita sarintany misy teboka maitso iray na maromaro manondro ny toeran'ny fitaovantsika isika. Tsy maintsy tsindrio isika Fitaovana rehetra ary avy eo ao amin'ny fitaovana very.
Rehefa tsindrio ny fitaovantsika dia ho hitantsika fa ny sisa amin'ireo teboka maitso dia manjavona, tsy mampiseho afa-tsy ny safidintsika isika, ary ny iPhone dia hita eo amin'ny farany ambony havanana.
Hanana safidy 3 isika, samy manana ny andraikiny avy:
Emit feo. Ity safidy ity dia tsara ho antsika raha sanatria very terminal isika, ohatra, eo amin'ny sofa ao an-trano, izay azo inoana. Izahay mandatsaka ny iPhone amin'ny sofa, mahazo manelanelana ny backrest sy ny cushion izy ary very io. Fantatsika fa manana izany ao an-trano isika, fa tsy aiza. Tsindrio eo Emit feo ary amin'izay no ahitantsika azy. Amin'ny fanamarihana tsara, ity safidy ity mandeha io na dia mangina aza no ananantsika ny terminal.
Mode (very). Ity safidy ity dia ahafahantsika, araky ny anarany, mametraka ny terminal amin'ny fomba very ka raha misy mahita azy dia tsy afaka mampiasa azy. Ary tsy izany ihany fa hamela antsika ity safidy ity asio hafatra misy nomeraon-telefaona iray ka miantso antsika izy ireo (ny antso, lojika, dia aloantsika). Mba hanaovana izany dia hanaraka ireto dingana manaraka ireto izahay:
Tsindrio ny Mode (very).
Mampahafantatra a isa telefaona hifandray ary tsindrio Next.
Manoratra hafatra izahay ary tsindrio manaiky.
Ilay olona mahita ny iPhone-tsika, rehefa manandrana mamoha azy, dia hahita ny pikantsary izay lohany amin'ity fidirana ity.
Raha izany no izy raha te-hitsitsy bateria (na izany aza, raha ny zavatra niainako dia tsy ilaina izany) ananantsika ny kilemaina ny localisation, rehefa mametraka fitaovana amin'ny Lost Mode hahetsika ny toerana hahitana ny iPhone. Tamin'ny fotoana andao hitady azy io ary hametraka ny lakile mamoha azy, hofoanana indray ny localisation.
Farany manana ny safidy isika "hamafa”Mba hanesorana ny votoatinao lavitra. Raha manana fampahalalana marefo manokana izahay ary maniry ny hanao izany, Azontsika atao ny mamafa ny atiny rehetra amin'ny iPhone ary avelantsika izy io satria avy amin'ny orinasa izy io. Hahatratra izany isika amin'ny tsindry roa fotsiny.
Tsindrio eo Borrar.
Ao amin'ny fikandrana mipoitra, kitiho ny Delete indray.
Farany manana ny safidintsika isika hidio ny iPhone an'ny IMEI. Ho an'ity ihany dia tsy maintsy antsoy ny mpandraharaha anay ary omeo azy ireo ny IMEI anay mba hanakanan'izy ireo anay lavitra. Ity hidin-trano ity dia zavatra iray, miaraka amin'ny hidy iCloud, tsy hampiasaiko aho. Ny fanakanana azy amin'ny IMEI dia tena mora tokoa, saingy sarotra be ny manokatra azy io raha averina amin'ny laoniny ny terminal. Saingy misy ny mety fa tsy te-handray risika isika ary ilaina izany fanakanana izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » IPhone Security » Inona no hatao raha very ny iPhone-ko?
Salama, mila olona manazava amiko ny fomba fampifandraisana ny iPhone 6 amin'ny headset bluetooth aho, nividy genius aho ary tsy manana fomba hifandraisana amin'ny iPhone. Misaotra
Jorge Cruz dia hoy izy:
Mividy hafa ……
Valiny tamin'i Jorge Cruz
Efa hatry ny ela aho no tsy natoky ny olombelona mahita finday sy poketra ...
ahoana raha manana kilema gps aho? tsy misy fomba hahitana azy amin'ny sarintany? Eny, hampiasana azy fotsiny aho rehefa hampiasa azy ... ity ho an'ny fitsitsiana bateria.
Manana GPS foana aho ary tsy mahatsikaritra fitetezana bateria mitete. Ny iPhone dia tsy hampandeha ny GPS fotsiny rehefa misy fangatahana mangataka azy. Amin'ny ankabeazan'ny fotoana dia tsy hisy fandaniana na dia ampitainao aza. Tsy haiko raha azonao ny saiko. Andramo alefa mandritra ny roa andro dia ho hitanao fa tsy mijaly amin'izany ny bateria. Raha manana GPS tsy mandeha ianao, ny fametrahana azy ao anaty maody very dia hampandeha ny GPS. Raha vantany vao mahita sy mamaha ny iPhone ianao dia tapaka indray ny GPS
Raha azo karohina amin'ny iphone hafa koa izy io dia mila manova ny id icloud ho an'ny anao fotsiny ianao dia mitady azy. Efa nanandrana izany imbetsaka aho.
Eny, fa ny tiako holazaina dia tsy azo atao amin'ny iCloud.com
tsy misy miasa na iray aza satria misy olona manome serivisy hanafoanana ny fiantohana iCloud
salama ary raha misy mahita azy ka maty dia ahoana no hampandeha ny fikarohana?
Azonao atao ny mandefa ny toerana farany: https://www.actualidadiphone.com/como-saber-la-ultima-localizacion-de-tu-iphone-incluso-si-se-queda-sin-bateria/
Viiviana Angela'h Galarza dia hoy izy:
Halako ny batterie xx fa tsy maharitra amiko mihintsy aho nividy azy herinandro lasa izay
Valiny tamin'i Viiviana Angela'h Galarza
Tsara ny lahatsoratra. Tsara foana ny mamelombelona ireo lohahevitra ireo
Very ny iPhone -ko nandritra ny roa andro ary rehefa nanandrana nitady azy aho dia nilaza tamiko fa tsy misy fifandraisana.
Hatraiza ny hamafin'ny efijery Apple Watch? Miaraka amin'ity horonan-tsary ity isika dia mahazo hevitra